राप्रपा विवाद : राणा र चन्दसहित सात सदस्यद्वारा बैठक बहिष्कार, क–कसले गरे बहिष्कार ? – Makalukhabar.com
राप्रपा विवाद : राणा र चन्दसहित सात सदस्यद्वारा बैठक बहिष्कार, क–कसले गरे बहिष्कार ?
काठमाडौं, साउन ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दोस्रो केन्द्रीय समितिका एजेन्डा तय गर्न बोलाएको कार्यसम्पादन समिति बैठक वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणासहित सात सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । आजको नयाँपत्रिका मा खबर छ । अध्यक्ष थापाले एकलौटी रूपमा ४२ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भन्दै असन्तुष्ट राणापक्षीय नेताहरू कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सहभागी भएनन् । अनुपस्थित नेताहरूले बुधबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय